Ciidanka Qaranka Somaliland Iska Caabiyay Weeraro Kaga Yimi Kooxda Nabad Diidka SSC Ee Taageerada Ka Haysta Maamulka Budhacad-badeeda Garoowe Iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Baaq Nabadeed Kasoo Saaray Xaalada | Araweelo News Network (Archive) -
Ciidanka Qaranka Somaliland Iska Caabiyay Weeraro Kaga Yimi Kooxda Nabad Diidka SSC Ee Taageerada Ka Haysta Maamulka Budhacad-badeeda Garoowe Iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Baaq Nabadeed Kasoo Saaray Xaalada
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta markii afraad baaq nabadeed u diray dadweynaha gobolada Sool iyo Buuhoodle, waxaanu ku baaqay inay joojiyaan kooxaha dagaalada ka wada deegaanadaasi. Iyadoo dhinaca kalena baaqani
kusoo beegmay iyadoo ciidmada qaranka Somaliland ee ku sugan jiida hore ee duleedka Buuhoodle ay saaka iska caabiyeen weerar ay kusoo qaadeen kooxda nabad-diidka SSC ee xidhiidhka leh Argagixisada, isla markaana taageerada ka hela maamulka Budgacad-badeeda Faroole ee xaruntiisu tahay Garoowe.
Baaqa nabadeed ee Madaxweyne Siilaanyo saaray maanta wuxuu u dhignaa sidan:-“Bismillaahi Raxmaani Raxiin, marka hore waxaan tacsi u dirayaa cid kasta oo uu khasaare ka soo gaadhay dagaalada ka dhacay Deegaanada Buuhoodle, waxaanan baaq nabadeed u jeedinayaa cid kasta oo faraha kula jirta.
1. Isla maalintii aan xilkan qabtay iyo Intii ka danbaysay waa markii Afraad ee aan Baaq nabadeed iyo gogol u fidiyo Cidii tabasho siyaasadeed qabta.
2. Waxa aanu dirnay oo goobta tegay ergo balaadhan oo muddo dheer hawshaa ku jirtay, ergadaas oo ka koobnayd Wasiirro, Madax-dhaqameed, Culimo, Madaxda Xisbiyada iyo waxgarad kale.
Waxaanay garab taagan yihiin dedaalka nabad-doonimo ee Somaliland doonayso.” Ayuu lagu yidhi baaqa Madaxweynaha Somaliland.
Dhinaca kale Kooxda Nabad-diidka ah ee xidhiidhka la leh Argagaxisida ee SSC, isla markaana taageerada ka haysta maamulka Budhacd-badeeda ee xaruntiisu tahay Garoowe ayaa saaka weeraro gaadmo ah ku soo qaaday fadhiisimmadda ciidanka qaranka Somaliland ee ku sugan jiida duleedka Buuhoodle.
Ciisanka qaranka Somaliland ee ku sugan jiida hore , ayaa iska caabiyay weerarkaas, illaa hadana ma jiro warar rasmiya oo ka soo baxay khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay, haseyeeshee qaar ka mid ah dadka deegaankaa ka dhaw oo khadka telefoonka kula soo xidhiidhay shebekadda araweelonews, ayaa u xaqiijiyay inuu dagaalkaasi bilaabmay saaka subaxnimadii hore, ka dib markii kooxda nabad-diidkuu ay madaafiic ku soo weerareen ciidanka qaranka.
Warku waxa uu intaa ku daray in ciidanka qaranku dib u riixeen kooxda maleeshiyadda ah, islamarkaana uu dagaalku socdo. Wixii kasoo kordha kala soco shebekada Araweelonews.com